Handball – CCOI: nisongadina ny ekipa Reonioney | NewsMada
Niditra tamin’ny andro fahatelo amin’ny lalao fifanintsanana, fiadiana ny amboaran’ny ranomasimbe Indianina, taranja handball, omaly, ireo ekipa mpifanandrina. Nandritra izay andro telo nifanesy izay, nisongadina hatrany ny ekipa reonioney. Ekipa anisan’ny sangany miohatra amin’ireo mpifaninana hafa.
Ho an’ny omaly, fandresena roa ny azon’ny Reonioney tamin’ny alalan’ny ekipan’ny Tamponnaise, vehivavy sy ny ekipan’ny Chateau Morange, lehilahy. Ity farany izay nifanandrina tamin’ny ekipan’ny ASSM, solontena malagasy ary nibata ny fandresena tamin’ny isa 20 no ho 19.
Azo lazaina ho antonony ihany ny vokatra ho an’ny Malagasy tamin’ny andro voalohany, teo amin’ny Cosfa. Tsy afa-bela nanoloana ny mpifanandrina taminy izy ary hita ho mbola misy ny lesoka eo amin’ny teknika.
(D) JSB (Reu) – Cap Sister (Sey) : 32 – 11
(D) AS Tsiky (Mad) – PC Boueni (May) : 22 – 25
(D) Tamponnaise (Reu) – THBC (Mad) : 21 – 10
(H) Saint Pierre HBC (REU) – Vacoas (Mau) : 37 – 27
(H) Tsingoni (May) – Cosfa (Mad) : 23 – 26
(H) ASSM (Mad) – Chateau Morange (Reu) : 19 – 20